Muxuu yahay tattoo-ga ugu adag ee la sameeyo si waafaqsan naqshadda iyo goobta | Tattoo
Muxuu yahay tattoo-ka ugu adag ee la sameeyo
Susana godoy | | Tattoos
Hadaan ka fikirno waa maxay tatuuga ugu adag in la sameeyo, sidoo kale way nagu adag tahay inaan haysanno hal tusaale oo keliya. In ka badan maxaa yeelay markaad ka hadlayso dhibaatada, waxaad tixraaci kartaa dhowr talaabo. Labadaba meesha aan u aadno si aan u sawirno tattoos iyo nooca naqshadeynta ayaa naga tagi doona dhibaatooyin aad u yar.
Haddii qofka la sawiray uu noqon karo odyssey, ma noqon doono a shaqo fudud oo loogu talagalay farshaxanka tattoo. Marka, maanta waxaan ogaaneynaa dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah in la ogaado taas oo ah taatuuga ugu adag ee la sameeyo. Haddii aad haddaba fikrad cad ka haysatid arrintaas, nala soo socodsii!
1 Muxuu yahay tattoo-ka ugu adag ee la sameeyo, meesha la dooranayo
2 Dhibaatada naqshadaha tattoo
3 Tattooistu waxay ka faalloodaan tattoo-ga ugu adag
Muxuu yahay tattoo-ka ugu adag ee la sameeyo, meesha la dooranayo
Waxaa laga yaabaa inaad si cad uga hadlayso halka aad ku xiraneyso sawirkaaga. Wax aad marwalba ka fikirto dhowr jeer kahor intaadan falin. Marka tani dhacdo, waxaan u tagnaa kuweenna farshaxanka tattoo lagu kalsoon yahay. Isaga ayaynu isaga saaraynaa dhammaan rajooyinkeenna wanaagsan iyo riyadeenna. Laakiin dabcan, had iyo jeer maahan wax fudud ama xirfadle ah. Tani ma muujineyso in howsha loo fulin waayey sida aan fileyno. Si fudud inay sidoo kale u muujin karaan walaacooda ku saabsan waxa aan dooneyno inaan xirno tattooed.
Xaaladdan oo kale, hadda maahan naqshad la taaban karo laakiin waa meesha. Dhammaan qaybaha jidhku si isku mid ah uma fududaan in la sawiro. Markay tahay meelaha waaweyn ee aasaasiga ah sida gacmaha ama lugaha, waxaa laga yaabaa inaysan dhibaato badan jirin. Laakiin waa run in mararka qaarkood dhibaatooyin soo baxaan. Xirfadleyda qaarkood waxay ku adkeysanayaan in qeybaha jirka qaarkood sida feeraha oo kale waxay noqon kartaa khiyaano.
Gaar ahaan markuu qofku yara xanaaqsan yahay ama markuu xanuunka si fiican u qaadan waayo maxaa yeelay wuxuu dhaqaajin doonaa wax ka badan intii loo baahnaa. Intaas waxaa sii dheer, dhagaha gadaashiisa sidoo kale waxay u horseedi karaan tattoo adag si loo sharaxo. Si fudud, sababtoo ah raaxada yar ee ay tani leedahay. Laakiin dabcan, hal shay ayaa adag oo mid kale, oo aad uga duwan, in aanan helin natiijo dhammaystiran. Tusaalooyinkaas waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay bushimaha gudahooda. Isbeddel ay dadka caanka ah qaarkood durba xirtaan.
Dhibaatada naqshadaha tattoo
Mararka qaar sidaa uma fududa. Maaha arrin imaatin iyo tagitaan leh a tattoo fiican. Tallaabooyinka noo horseedaya inaan gaarno farshaxanka 'tattoo' waa dhowr. Had iyo jeer waa inaan sifiican iskula socodsiino meesha aan ku qaban doono iyo dabcan, naqshada aan rabno. Maaha wax isku mid ah in maskaxda lagu hayo sidii markaa loo arko iyada oo ku dhex jirta jidhkeenna. Sidaa awgeed, had iyo jeer waxay u baahan tahay dib-u-eegis xoogaa ah. Haddii aad dooratay naqshadaha leh midabyo, midabbo ama cabbirro waaweyn, waa inaad niyadda u qabtaa in kal-fadhiyadu sii dheeraan doonaan.
Xaaladaha qaarkood waxay noqon kartaa maalmo ama laga yaabee toddobaadyo illaa iyo inta uu tattooku gebi ahaanba dhammaanayo. Sababtaas awgeed, waa maxay sababta aan u aaminsanahay in markii nala weydiiyo oo ah midka ugu adag ee la sameeyo tattoo, waxaa nalooga tagay dhammaan kuwa leh kakanaantaas. Tusaale ahaan, haddii aad doorato gacmo-gashi, waxaad u baahan tahay xoogaa dulqaad ah. Marka hore si naqshad waliba u guursato tii ka horreysay illaa inta laga helayo natiijo weyn oo kama dambays ah.
Este nooca tattoos waxay badanaa leedahay dhowr mowduuc oo aad u qurux badan markii lagu biiro. Laakiin dabcan, in kastoo taasi aysan dhicin, haddana samirku mar walba waa ku lug leeyahay. Markaa sidoo kale way adag tahay in la sugo, in xanuunka mar kale la maro, iwm. In kasta oo waxaas oo dhami ay mudan yihiin in la arko natiijada.
Tattooistu waxay ka faalloodaan tattoo-ga ugu adag
Xirfadleyda qaarkood sidoo kale waxay miisaamaan taatikada aadka u adag. Shaki la'aan, qaar badan ayaa isku raacsan in maqaarku yahay qodob aad muhiim u ah oo laga yaabo inaysan aad u badnayn naqshadeynta. Taasi waa, marka maqaarku aad u xasaasi yahay ama u jilicsan yahay una jilicsan yahay, waxay ogaanayaan inay yeelan doonaan dhibaato gaar ah. Si la mid ah markaan ka horreyno a qaab macquul ah ama 3D ah. Shaki la'aan, waqti badan waa in la maal galiyaa si ay uga dhigto mid kaamil ah. Tattoo noocee ah ayaad ugu yeereysaa kan ugu adag ee la sameeyo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Muxuu yahay tattoo-ka ugu adag ee la sameeyo
Kani waa tattoo-ga dhalaalaya ee Dakota Johnson ku sito mid ka mid ah gacmaheeda
La kulanka tattooists: Eva Krbdk